Firy ny karbaona tokony hohaniko isan'andro mba hihena? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Ohatrinona ny karbaona tokony hohaniko - ny valin'ireo olana
Ohatrinona ny karbaona tokony hohaniko - ny valin'ireo olana
Firy ny karbaona tokony hohaniko isan'andro mba hihena?
Raha ny filazan'ny Food and Drug Administration (FDA), ny Daily Value (DV) ho an'nykarbaonadia 300 gramaisan'androrahovianamihinanakaloria 2 000levitra(2). Ny olona sasany mampihena ny andavanandronykarbaonafihinanana amin'ny tanjon'nymampihena lanja, mampihena hatrany amin'ny 50-150 gramaisan'andro.2 apr 2020
Ny fampihenana ny habetsan'ny gliosida ao amin'ny sakafonao dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampihenana lanja. Mampihena ny fahazotoan-komana ianao ary miteraka fihenan-danja mandeha ho azy tsy misy fanisana kaloria na fanaraha-maso ny ampahany. Ka andeha hojerentsika hoe ohatrinona ny gliosida tokony hohaninao isan'andro mba hihena.
Te hanazava fotsiny fa ny fahaverezan'ny gliosida dia tsy fomba tokana hampihena ny lanja, fa tena mandaitra, indrindra raha nanandrana tavy ambany ianao na nanandrana nanisa kaloria ary tsy nahomby tamin'ny fahazaran-dratsinao mihinana gliosida. , izay fantatra amin'ny hoe fihinan'ny karbaona ambany. Midika izany fa ny siramamy sy ny starch toy ny mofo, paty, vary sns dia soloina proteinina sy tavy.
Ny lakileny dia ny fampitomboana ny proteinina, izay hanampy anao hihinana kaloria kely kokoa amin'ny ankapobeny, tsy misy hanoanana sy tsy fahafaham-po isan'andro akory, miampy porofo vaovao be dia be fa ny fihinanana karbaona ambany dia misy tombony mihoatra ny fihenan'ny lanja, indrindra raha manana ianao olana ara-pahasalamana metabolika toy ny diabeta karazana 2. Eny ary, andao jerena ny torolàlana momba ny karbaona ambany izay mihatra amin'ny ankamaroan'ny olona. Ny tiako holazaina indrindra dia satria ny fihinanana gliosida tsara indrindra Mazava ho azy fa miankina amin'ny taonany, ny lahy sy ny vavy, ny firafitry ny vatany ary ny fari-pahaizan'izy ireo ankehitriny, ny kolontsaina sy ny safidiny ary ny toetran'ny metabolika misy azy ny olona iray.
bisikileta ho an'ny olona matavy
Noho izany, ny gliosida 100 ka hatramin'ny 150 grama isan'andro dia ny fihinanana gliosida antonony kokoa. Rehefa heverintsika fa ny sakafo antonony dia misy mihoatra ny 250 grama isan'andro. Noho izany dia mety ho an'ny olona mahia, mavitrika ary miezaka ny ho salama sy hihazona ny lanjany fotsiny.
Tena azo atao ny mampihena ny lanja amin'izany sy ny fihinanana gliosida rehetra, saingy mety mitaky anao hanisa kaloria na hifehezana ny fihinan'ny legioma rehetra azonao eritreretina, voankazo marobe isanandro, vola kely vitsivitsy nefa tsy marihitra toy ny ovy. , ovy mamy, ary voamaina mahasalama toy ny vary sy oats. Karazan-gliosida manodidina ny 50 ka hatramin'ny 100 grama isan'andro no tena tsara raha te hihena mora foana ianao rehefa manampy karibômatika kely amin'ny sakafo miaraka amin'izay. Izy io koa dia andiam-pikojakojana tsara ho an'ireo olona tsy mahazaka gliosida.
Eny ary, ny gliosida azonao hanina, legioma betsaka toy ilay faritra hafa, manodidina ny voankazo roa isan'andro, karibonetra starchy kely toy ny ovy sy ny fihinana tavy dia maniry hahazo kely. Fantatrao izao fa io karazana gliosida io, ary na eo amin'ny 100 na 150 grama aza, dia tsy maintsy esorina amin'ny sakafo tsy misy fako sy tsakitsaky. Amin'ny sakafo dia saika avo dia avo amin'ny voamaina voadio na siramamy ampiana, na izy roa, izay midika hoe gliosida avo lenta tokoa.
Fa ny zavatra tsara dia manondraka sakafo junk fotsiny ianao eny an-dàlana mankany amin'ny fidirana gliosida feno ambany sy mahasalama. Eny, ankehitriny isika dia miditra amin'ny karbaona karbaona ambany indrindra 20 ka hatramin'ny 50 grama gliosida isan'andro, fantatra koa amin'ny hoe sakafo ketogenika. Ankehitriny, raha mihinana latsaky ny 50 grama isan'andro ianao dia hidina any amin'ny ketosezy ny vatanao.
Angovo ho an'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny vatana ketôn ary misy fiantraikany ara-pahasalamana metabolika mahery vaika izay mety hiteraka fihenan-danja be. Ny gliosida azonao hanina, legioma karbaona be dia be, tsy misy voankazo afa-tsy voaroy, dia azo inoana fa mila atambatra amin'ny crème satria ny fitomboan'ny tavy dia mila ampitomboina mba hahafeno ny filan'ny kaloria. Azonao atao ny mahazo ny soritry ny gliosida avy amin'ny sakafo hafa toy ny zavokà, Manana voanjo sy masomboly.
Ankehitriny, ny gliosida dia mamorona isan-jato isan-jato amin'ny fidiranao angovo, hitombo be ny fihinananao tavy. Mila fifehezana fatratra koa ianao hanaraka io fomba fisakafoanana io, ary ny ankamaroan'ny olona dia manao azy io vonjimaika fotsiny. Izany dia mitondra ahy amin'ny teboka manaraka.
Raha manana aretina ianao izao na marary, zava-dehibe ny miresaka amin'ny dokotera alohan'ny hanaovana fiovana lehibe eo amin'ny sakafo, indrindra raha misakafo ketogenika ianao, izay mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny hormona sy lafin-javatra hafa izay misy fiantraikany amin'ny anao. fahasalamana. Tiako hazava ihany koa fa ny sakafo gliosida ambany dia tsy ny fihenan'ny lanja fotsiny, porofoy ny fahasalamanao ary midika izany fa tokony hiorina amin'ny sakafo tsy voavaha ary ny loharanon'ny gliosida dia tokony ho be tavy. Tadidio fa ny sakafo tsy misy karbaona karbaona ambany dia mbola sakafo tsy fanao ihany, okay? Ankehitriny, raha te hanatsara ny fahasalamanao ianao dia safidio ny sakafo tsy voahodina toy ny hena, trondro, atody, legioma, voanjo, tavy mahasalama ary vokatra vita amin'ny ronono feno tavy.
Ankehitriny dia manana ny zavatra rehetra ilainao ianao manomboka amin'ny sakafo ambany karbaona. Aza hadino àry fa ampy 100 ka hatramin'ny 150 grama. Ny teboka fanombohana tsara, eo anelanelan'ny 50 sy 100 grama dia tena tsara amin'ny fihenan-danja, ary na inona na inona ambanin'ny 50 grama dia heverina ho karbônina ambany na ketogenika ary mety tsy mety aminao izany.
Azonao atao ny manomboka amin'ny gliosidratanao amin'ny appor a. Manisa ny vohikala Diet Calculator hahitanao hoe ohatrinona ny karbaona no laninao ao anatin'ny iray andro, fa amin'ny farany dia tsy mila manisa karbaona ianao raha tsy tianao. Mihinana proteinina kely fotsiny miaraka amin'ny tavy mahasalama sy legioma betsaka isaky ny misakafo, afaka manipy voanjo sy sakafo feno tavy ho an'ny fepetra tsara, misafidy oody tsy voavaha, mora be izany.
Misaotra tamin'ny famindrana. Raha hitanao fa mahasoa azy io dia aza hadino ny mametraka ankihibe. Raha mbola tsy nanao izany ianao dia azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube anay ho an'ny Authority Nutrition amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra mena eo ambanin'ilay lahatsoratra ary avy eo dia ho hitanao ireo lahatsoratra vaovao rehetra vantany vao avoaka izy ireo. (mozika malefaka)
Karba firy no tokony hohaniko amin'ny sakafo karbaona ambany?
Ferana isan'andro 0,7 ka hatramin'ny 2 grama (20 hatramin'ny 57 grama) an'nygliosidadia mahazatra miaraka aIVA-sakafo sakafo karbôtika. Ireo sandan'nygliosidamanome kaloria 80 ka hatramin'ny 240. SASANYIVA-sakafo fihinanana karbaonamamepetra fatratrakarbaonamandritra ny dingana voalohany an'nylevitraary avy eo ampitomboina tsikelikely ny isan'ireo avelakarbaona.18 nov Feb 2020
Tsy misy fetran'ny karbaona ara-dalàna ho an'ny keto. Ny marina dia samy manana fetran'ny karbaona isan-karazany ny olona tsirairay avy izay tokony hifikirany mba hahatratraran'izy ireo ny ketose ary hanosika ny famokarana ketône. Hatao hanamorana ny raharaha izany raha toa ka misy isa majika iray hitazonana fotsiny ao an-tsaina fa misy lafin-javatra maro afaka manova sy mamaritra io isa io.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia hanampy anao hahita valiny manokana ho an'ilay fanontaniana hoe: 'Inona no fetra ketocarb-ko?' Mba hahafahan'ny vatanao manomboka mamokatra ketône sy mandoro tavy dia mila manova ny fahazarana mihinana ianao mba hahafahan'izy ireo manana gliosida vitsivitsy. Midika izany fa fisorohana ny sakafo toy ny voam-bary, voankazo, tubers ary siramamy rehetra. Fa kosa, ny hena matavy, menaka, anana maintso, legioma manify, ary vokatra vita amin'ny ronono matavy, ary koa ny voanjo sy masomboly.
Ny voankazo sasany, toy ny zavokà sy voaroy, ary ny zava-mamy toy ny stevia sy erythritol, dia azo ampidirina ao anaty sakafo ihany koa, raha vao nametraka ireo fototra ireo isika, andao hofaritana ny fetra gliosidraty. Na dia mety miova amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa aza ireo fetra gliosida ireo dia misy fatran'ny gliosida izay azon'ny olona rehetra ampiasaina hahatrarana ketosis. Ity fetra ity dia 35 grama an'ny gliosida totaliny ary gonyidrida netina 25 grama.
Aza adino, ny gliosida net dia hita amin'ny alàlan'ny fanesorana ny grama fibre amin'ny grama misy gliosida rehetra. Raha tsy miditra ketosis ianao na te hahita ny fetran'ny karbôtika anao manokana dia mila fantarinao ireo anton-javatra hafa izay mandray anjara amin'ny ketosis. Na iza na iza dia afaka mizatra amin'ny ketones mirehitra ho an'ny solika.
Mandritra ny fampifanarahana keto dia lasa mahomby kokoa amin'ity sela ity ny sela. Arakaraky ny halavan'ny vatanao amin'ny fandoroana ketônika ho an'ny solika, ny haingana kokoa dia afaka mamindra amin'ny ketosis raha oharina amin'ny manomboka sakafo ketogenika. Ho tambin-karama fanampiny, rehefa Raha ampiasain'ny keto-adapté ianao dia matetika afaka manampy gliosida fanampiny ary mijanona ao anaty ketosis.
Manoro hevitra anao izahay mba hanombohana miadana miaraka amin'ity fotokevitra ity ary hanaraka sakafo keto henjana mandritra ny 3 ka hatramin'ny 6 volana farafahakeliny alohan'ny andrana amin'ny fihinanana gliosidratanao. Ny sela dia mitaky fotoana ampiasaina amin'ny famokarana g sy fampiasana ketôniana ho an'ny angovo. Ho fanampin'ny fotoana naha-ketosis anao, ny fampihetseham-batana, ny fihinanana proteinina sahaza anao ary ny fanamaivanana amin'ny fihenjanana dia antony hafa manatsara na manimba ny fahafahan'ny vatanao mampifanaraka ny sakafo ketogenika.
Ny fampihetseham-batana dia zava-dehibe amin'ny famaritana ny fatran'ny gliosida anao. Ny hetsika avo lenta dia manampy amin'ny famoahana ireo siramamy voatahiry antsoina hoe glycogen avy amin'ny hozatrao. Mba hampihenana ny glycogen voatahiry anao, manaova fampihetseham-batana mahery vaika 30 ka hatramin'ny 60 minitra, toy ny fampiakarana ny lanja, mandritra ny andro vitsivitsy na CrossFit. Ataovy izay hahazoana antoka fa averina averina aorian'ny rano avy eo ary makà fanampin-tsakafo mineraly ilaina.
Raha vantany vao lany ny glycogen anao dia azonao atao ny manao fanatanjahan-tena mandritra ny 30 minitra isan'andro hanampiana handoro tavy sy ketôn, toy ny fandehanana mafy na bisikileta Ho an'ny vokatra tsara kokoa dia manaova fanazaran-tena alohan'ny hisakafoanana. Amin'ny fampitomboana ny haavon'ny hetsikao sy ny fanaovana karazana fanazaran-tena mety amin'ny fotoana mety, dia afaka mahazo ketosis haingana ianao, mandoro tavy bebe kokoa ary manatsara ny fahasalamanao. Ho vokatra tsara dia azonao atao ny mampitombo ny fatran'ny gliosida keto isan'andro nefa tsy mampihena ny haavon'ny ketônanao.
Raha atleta ianao, ny fiofanana sy ny karbaona dia somary somary tohatra kokoa, noho izany dia aza hadino ny mijery ilay lahatsoratra lalindalina kokoa momba ny Rulated.me mitondra ny lohateny hoe Ahoana no ahitanao ny fetran'ny karbohidratyo amin'ny sakafo ketogenika. Ataovy ao an-tsaina fa ny fanatanjahan-tena be loatra dia mety miteraka fihenjanana fanampiny amin'ny vatana ary misy fiantraikany amin'ny fahaizanao mijanona ao amin'ny ketosis.
Ny adin-tsaina dia singa iray hafa amin'ny famaritana ny fetran'ny gliosidratanao. Ny hormonina mifandraika amin'ny fihenjanana toy ny kortisol dia mampiakatra ny fatran'ny siramamy ao anaty anao ary afaka mampihena ny famokarana ketône. Ny sorisory indraindray tsy azo sorohina amin'ny tena izy, fa ny tena olana dia miaraka amin'ny adin-tsaina isan'andro, isan'andro.
Ny fihoaram-pefy, tsy fihinanan-kanina, ny fifantohana be loatra amin'ny lesoka, ny fanahiana momba ny ho avy, ary ny asa tsy an-kijanona tsy misy fitsaharana no fahita matetika amin'ny adin-tsaina mandritra ny andro. Ireo adin-tsaina rehetra ireo miaraka dia mety miteraka fatran'ny siramamy ao amin'ny rà be loatra ary manakana anao tsy ho very tavy na hihazona hozatra. Voafehy ny adin-tsaina.
Anisan'izany ny fahazarana misakafo ara-pahasalamana tsy tapaka, ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso amin'ny fihanaky ny masoandro fanampiny, ny fanoloana ny fampihetseham-batana avo lenta amin'ny safidy ambany ambany, ary ny fisaintsainana indraindray ny haavon'ny ketosis. Amin'ny sakafo ketogenika, manodidina ny 25% ny kaloriainao dia tokony avy amin'ny proteinina. Rehefa avo loatra ny fihinanana proteinina dia tototry ny asidra amine izay mamoaka insuline ny vatana.
Mandefa hafatra any amin'ny sela ny insuline fa misy angovo ampy azo avy amin'ny asidra amine ary mijanona tsy mamokatra sy mandoro ketône intsony izy ireo. Raha te hahalala hoe ohatrinona ny fihinana proteinina mety aminao, zahao ny Reto.me's Keto Calculator.
Miaraka amin'ireo antony rehetra ireo ao an-tsaina dia afaka manandrana mametra ny fatran'ny gliosida keto anao ianao. Hitanay fa ity no fomba tsara indrindra hanampiana gliosida 5 grama tsotra fotsiny avy amin'ny legioma na voankazo misy karbaona isan'andro raha tsy tsikaritrao ny fihenan'ny haavon'ny ketônanao ary jereo ny gliosidratanao mandra-piverin'ny ketônanao ary hitanao ny fetran'ny karbôgy vaovao. . Mba hitazomana tsara ny ketônanao dia aza hadino ny mampiasa metatra ketôra ra sy mandrefy ny ketônanao amin'ny fotoana mitovy isan'andro amin'ny tadin'ny urine satria tsy dia marina loatra izy ireo amin'ny valiny azo antoka.
Ny tanjona dia ny hampitomboana tsikelikely ny gliosidrano laninao nefa mitazona ketosis salantsalany na ambany ianao. Manodidina ny 1,5 metatra ho an'ny ketone anao izany.
Ny fotoana nijanonanao tao amin'ny ketosezy, ny fahazaran-dratsy, ny haavon'ny adin-tsaina ary ny fihinanana proteinina dia misy fiantraikany amin'ny fetra gliosida keto anao manokana. Ny tsirairay amin'ireo lafin-javatra ireo dia manana fahaizana mampitombo na mampihena an'io isa isan-karazany ao anaty gliosida io. Azonao atao ny manandrana ny tenanao, na mijanona eo ambanin'ny 35 grama misy gliosida total mba hitazomana anao amin'ny ketosis na inona na inona.
Zahao tsy tapaka ny Rulated.me raha ny zavatra rehetra tianao ho fantatra momba ny sakafo keto. Manana lahatsoratra mahafinaritra bebe kokoa, drafitry ny sakafo, fomba fahandro, lahatsoratra mampahalala, tantaram-pahombiazana ary maro hafa izahay hanampy anao amin'ny diany keto!
Ny karbaona 100 dia karbaona ambany isan'andro?
Na dia tsy misy famaritana hentitra aza aIVA-karbaonasakafo, na inona na inona ambanin'ny100–150 grama isaky nyandroamin'ny ankapobeny dia heverinaIVA-karbaona. Ity vola ity dia azo antoka fa kely lavitra noho ny sakafo tandrefana mahazatra. Mety hahatratra valiny lehibe amin'izany ianaokarbaonaisan-karazany, raha mbola mihinana sakafo tsy voavaha sy tena izy ianao.
Ahoana no fomba hikajiako ny fihinanana karbôtika?
fikajianaharatokarbaonadia fomba iray hanaovana izany. Ny teny hoe 'netkarbaona”Manondro fotsiny nykarbaonaizay tototry ny vatana. nykajyny haratokarbaonaamin'ny sakafo manontolo, esory ny fibre amin'ny totalin'nykarbaona. nykajyny haratokarbaonaamin'ny sakafo voahodina, esory ny fibre sy ny ampahany amin'ny alikaola siramamy.10 Mey 2017
Salama, ary miarahaba antsika diabeta Type 1. Androany isika dia hijery izay dikan'ny fanisana gliosida ary ny fomba fatra insuline tsara araka ny habetsan'ny gliosida ao amin'ny sakafo. Raha manana diabeta type 1 ianao dia tsy maintsy manome insuline alohan'ny hisakafoanana hahafahan'ny vatanao mampiasa ny angovo avy amin'ny sakafo.
Fa ahoana no ahalalanao hoe ohatrinona ny insuline homena? Mazava ho azy fa ny paoma kely dia tsy mila insuline mitovy amin'ny mofomamy iray lehibe. Mba hamaritana hoe ohatrinona ny insuline hatramin'ny fatra dia tokony ho fantatrao hoe ohatrinona ny gliosida ao anaty sakafo nohaninao. Ny fomba tsotra indrindra hahitana izany dia amin'ny marika momba ny sakafo ao ambadiky ny ankamaroan'ny sakafo.
Hiresaka momba ny fomba hahitana ny habetsan'ny gliosida amin'ny sakafo isika raha tsy misy fampahalalana momba ny sakafo ao aoriana. Misy zavatra vitsivitsy tokony hotadiavinao ao amin'ny latabatra mahavelona antsika hanampiana anao hamantatra hoe ohatrinona ny gliosida ao anaty sakafo. Voalohany, tokony hijery ny haben'ny asa fanompoana ianao.
Mitovy amin'ny vola no tadiavinao hohanina ve? Iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hivoahana amin'ny fanisana karbaona ny tsy fahalalana ny haben'ny asa fanompoana. Ny sakafo sasany izay toa tsy tokony hisy afa-tsy sakafo iray dia mety misy roa na mihoatra, izay mety hampitombo avo roa heny na ho avo telo heny ny gliosida haninao. Ankehitriny rehefa fantatrao hoe inona ny haben'ny fanompoana, ny zavatra manaraka tokony hojerenao dia ny gliosida total.
Fantatrao izao hoe firy ny gliosida totalin'ny sakafo. Toa efa vita ianao, saingy misy isa maromaro azo dinihina. Jereo ka jereo raha misy fibre.
Ny fibre dia karazana gliosida iray izay tsy zakan'ny vatanao, ka tsy misy fiatraikany amin'ny siramamy ao amin'ny ranao. Esory ny grama fibre amin'ny grama misy gliosida total. Mitadiava alikaola siramamy koa.
Sarotra ho an'ny vatanao ihany koa ny mandevona azy, saingy tsy dia sarotra loatra ny mandevona toy ny fibre. Esory alikaola siramamy 1/2 grama avy amin'ny gliosidaut. Ka andramo izany! Tsarovy ny fizotry ny fanisana gliosida.
Misy gliosida totalin'ny 37 grama, fibre 4 grama mihena, minus 10 nozarain'ny 2 na 5, ny alim-bolan'ny siramamy misy 28 grama. Ny isa aorian'ny nanesoranao ny fibre sy ny antsasaky ny siramamy misy siramamy dia nantsoina hoe karbohidraty net. Ity no isa hampiasanao rehefa manamboatra insuline.
Ankehitriny rehefa fantatsika ny fomba hahitana karbaona amin'ny harona avy amin'ny fampahalalana momba ny sakafo, andao hanao fanatanjahan-tena vitsivitsy. Jereo ny mari-pahaizana momba ny sakafo ary alao ny karibonetra firy ao anaty sakafo. Ho hasehontsika ny valiny aorian'ny folo segondra eo ho eo, saingy aza misalasala miato ny lahatsoratra mba hanana fotoana bebe kokoa amin'ny kajy anao.
Ka mora tokoa ny manisa gliosida, sa tsy izany? Fa ahoana no ahitanao ny gliosida sy ny sakafo nefa tsy nasianao marika ara-tsakafo toy ny vokatra na ny resipeo namboarina? Manana loharano maro ny Internet izay afaka manampy anao manisa gliosida sy sakafo tsy voatanisa ao amin'ny fampahalalana momba ny sakafo. Ireto misy loharanom-pahalalana ilaina amin'ny fikajiana gliosida sy sakafo tsy misy fampahalalana momba ny sakafo. Fantatrao izao ny fomba hamaritana ny gliosidrasy net amin'ny sakafo, tonga ny fotoana anaovana dosie amin'ny insuline.
Fa ohatrinona? Fantatrao hoe firy ny gliosida ao anaty sakafo, fa ahoana no handikana azy io ho lasa insuline? Tena mora izany. Azo inoana fa nomen'ny dokoteranao zavatra antsoina hoe tahan'ny gliosida na insuline ianao. Ity dia tahan'ny milaza aminao hoe ohatrinona ny insuline insuline tokony homena ho an'ny gliosida maromaro.
Ny ohatra iray amin'ny tahan'ny gliosida dia mety ho singa iray an'ny insuline isaky ny 10 gliosida na 1 singa isaky ny 7 gliosida. Ny tahan'ny ampiasanao dia miankina amin'ny lanjanao, ny fampihetseham-batanao ary ny faharetan'ny diabeta. Ankehitriny rehefa hainay ny manisa gliosida ary avy eo avadika ho lasa insuline io isa io dia ireto misy asa fampiharana vitsivitsy hafa hanampy anao hahafehy an'io fahaizana io.
Ny fanisana gliosida dia mety ho sarotra be amin'ny isa isan-karazany tadidinao ary mety hanao fahadisoana ianao, fa arakaraky ny anaovanao azy no mora kokoa aminao ary ho lasa manam-pahaizana manokana ianao amin'ny fanisana ho karbohidraty.
Inona ny karbaona tokony hohalaviriko mba hahavery tavy kibo?
Fisorohana fotsiny ny voadiokarbaona- toy ny siramamy, vatomamy ary mofo fotsy -tokonyampy, indrindra raha mitazona ny fidiran'ny proteinina ho avo ianao. Raha ny tanjona dia nyveryhaingana ny lanja, olona sasanyhampihenanykarbaonafihinanana hatramin'ny 50 grama isan'andro.03/17/2020
Tsara kokoa ve ny manisa kaloria na karbaona?
Ho an'ny fihenan-danja, ny isan'nykaloriamandray ianao dia tokony ho ambany noho ny isakaloriamandoro ao anatin'ny iray andro ianao. Rehefa miresakakarbaona, Ianao dia milamanisany isan'ny haratokarbaona, izay azo amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fibre amin'ny totalinykarbaonaisaky ny fanompoana. Izao holazaina hoe iza amin'ireotsara kokoa, hoy izahay na tsia.18.09.2020
Karba firy no tokony hohaninao isan'andro?
Ny Toro lalana momba ny sakafo ho an'ny Amerikanina dia mamporisika izanygliosidamamorona 45 ka hatramin'ny 65 isan-jaton'ny kaloria isan'andro. Ka, rahaianareomahazo kaloria 2.000 aandro, eo anelanelan'ny 900 sy 1.300 kaloriatokonyavy anygliosida. Midika izany eo anelanelan'ny 225 sy 325 grama nygliosidanyandro.
Firy ny karbaona ilaiko isan'andro?
Ny Toro lalana momba ny sakafo ho an'ny Amerikanina dia mamporisika izanygliosidamandrafitra 45 ka hatramin'ny 65 isan-jaton'ny totalinaoisan'androkaloria. Ka, raha mahazo kaloria 2.000 aandro, eo anelanelan'ny 900 sy 1.300 kaloriatokonyavy anygliosida. Midika izany eo anelanelan'ny 225 sy 325 grama nygliosidanyandro.
Karba firy no tokony hohaninao ao anatin'ny iray andro?
Ny Toro lalana momba ny sakafo ho an'ny Amerikanina dia mamporisika izanygliosidamandrafitra 45 ka hatramin'ny 65 isan-jaton'ny totalinaoisan'androkaloria. Ka, rahaianareomahazo kaloria 2.000 aandro, eo anelanelan'ny 900 sy 1.300 kaloriatokonyavy anygliosida. Midika izany eo anelanelan'ny 225 sy 325 grama nygliosidanyandro.
Mahatonga anao hitombo lanja ve ny karbaona?
Manome tavy anao ve ny gliosida?? Sakafo rehetramety hiteraka fisondrotanaRAHAianareomisakafo be loatra. Na avo ny sakafonaomatavyna avo lentagliosida, rahaianareomatetika mandany angovo betsaka noho ny ampiasain'ny vatanao,ianareomety izanymahazo lanja. Gram ho an'ny gram,gliosidamisy kaloria kely kokoa noho nymatavy.
Inona ny habetsan'ny gliosida isan'andro?
Ny torolàlana momba ny sakafo dia manolo-kevitra ny karbaona hanome 45 hatramin'ny 65 isan-jaton'ny fihinanana kaloria isan'andro. Ka raha mihinana sakafo 2000-kaloria ianao dia tokony hikendry225 ka hatramin'ny 325 grama eo ho eony karbaona isan'andro.
Ohatrinona ny servisy karbaona tokony hohaniko isaky ny sakafo?
Midika izany fa ny ankamaroan'ny vehivavy dia mila servisy karbôla 3 ka hatramin'ny 4 (45-60 grama) isaky ny misakafo, raha ny ankamaroan'ny lehilahy kosa dia mila servisy karbôla 4 ka hatramin'ny 5 (60-75 grama). Na izany aza, miankina amin'ny taonanao, lanja, haavon'ny hetsika ary fanafody diabeta ireo vola ireo. Hamarino tsara fa miara-miasa amin'ny mpitsabo aretin-tsaina ianao mba hametrahana tanjona kendrenao manokana.
Ahoana ny fikajiana karbônina amin'ny harato mandritra ny andro?
Raha ny tena izy, ny teôria momba ny karbaona net dia ny karôbôta sasany tsy mila asiana karbaona mandritra ny andro. Ohatra, misy karbaona 40 grama ao anaty kaopy quinoa masaka sy fibre 5 grama. Karbao totalin'ny 40 grama - fibre 5 grama = karbaona 35 grama.